Onye isi Xiaomi tụfuru nzọ nke nde dollar 150 | Androidsis
Xiaomi CEO tụfuru nzọ nke $ 150 nde na onye isi nke Greek
Onye isi oche Xiaomi Lei Jun yiri ka onye furu efu onye isi ala Greek Electric Appliances Inc. Dong Mingzhu. Nke a na -abịa mgbe Greek kọsịrị mkpokọta ego ha nwetara maka 2018, nke ruru ijeri 198 ijeri, ụnyaahụ.
Nzọ ahụ, nke Lei Jun mere na telivishọn mba, na Disemba 2013, dabere na ego Xiaomi nwetara karịrị Greek n'ime afọ ise na -esote, site na mgbe ahụ ruo ugbu a. Otú ọ dị, ego Xiaomi nwetara maka otu oge ahụ bụ yuan 174,915 (~ 23,000 euro), ihe ruru 20,000 na-erughị ọnụ ọgụgụ ndị Gris, nke bụ naanị ihe dị ka euro 2,600.
Ọ bụ ezie na anyị amabeghị ma Lei Jun ga -ejigide atụmatụ nzọ ya wee rapara na ya, ọ bụrụ na o kpebie ime ya, ọ ga -efu ya otu puku ijeri yuan, nke pụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde $ 1.
Ngwa eletriki Greek
N'oge ịme nzọ a, ọ dị ka David na -ama Goliath aka, ebe Greek na -eti Xiaomi na ngalaba ọ bụla, site na ego ha nwetara na nọmba ụlọ ọrụ ruo ọbụna ndị ọrụ. Mana Lei Jun nọ na -eme nzọ na ụlọ ahịa siri ike n'ịntanetị, nke nyeere ụlọ ọrụ ahụ aka ịbụ otu n'ime ụlọ ọrụ ama ama ama ama n'ụwa. Agbanyeghị, nke a ezughi maka Xiaomi karịa onye nrụpụta ikuku ikuku kacha ibu n'ụwa.
Ọ bara uru ikwu nke ahụ Nzọ mbụ Lei Jun bụ naanị 1 yuan. Agbanyeghị, Onye isi ala Gris Dong Mingzhu welitere nzọ ahụ na ijeri yuan XNUMX.
Jun kwuru n'ụzọ zuru ezu, "Ka mba ahụ niile bụrụ onye akaebe anyị, ọ bụrụ na ego anyị karịrị nke Gris n'ime afọ ise, Onye isi ala Dong, biko kwụọ m otu yuan." Mgbe ahụ, na nzaghachi, Dong kwuru, "Ka anyị gaa kwụọ 1 nzọ ahụ. trillion (yuan) ».
Xiaomi ma ọ bụ Lei Jun ekwubeghị okwu n'okwu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi CEO tụfuru nzọ nke $ 150 nde na onye isi nke Greek
Nwere ike igwu Fortnite site na Xiaomi Redmi Rịba ama 7 Pro